पाहुनामहात्म्य | samakalinsahitya.com
पाहुनाको पिरोलोले पिरोलिएकी मेरी श्रीमतीले एक दिन प्रस्ताव राखी–“डेरा सरूँ अर्काे कुनै टोलतिर ।”
मैले उसलाई ठुटे अर्ती दिंदै भने– “हेर् केटी, डेरा सर्नु नै पाहुनाको पीडाबाट समाधान हुने उपाय होइन । भोलि यहाँको साटो त्यहाँ पनि पुगिहाल्छन् नि । तैंले एउटा कोठा मात्र लिनु भनिस् । यो पनि उचित होइन । तेरै माइतबाट तेरै आमा वा तेरै दाजुभाइहरु पनि त आउन सक्छन् । सधैं मेरातिरका मात्र आउँछन् भन्ने के छ र ? त्यस बेलाको समस्या कसरी टार्छेस् लौ भन् त ? बरु अरु कुनै उपाय सोच्नु पर्छ ।” मैले उसलाई थामथुम पारें । अनि कसै गरी पाहुनाको बोझ बोकैरै समय काटिँदै गयो ।
एक दिन अचानक ढोका ढक्ढकाउँदै मेरो कोठामा घरभेटी पसे ।
“आज त तपाईंकोमा गुज्राँती भैंसी नै पो परेछन् कि क्या हो ? अघाउँजी खान दिनुभएछ क्यारे चर्पी र बाथरुम भरि गोब्¥याएछन् ! थलो चाँडै सोहोर्नुहोस् त ! यत्रो थास हग्ने यस्ता गुज्राँती भैंसीहरु नपाल्नुहोस् है ! घाँस धेरै नदिनुहोस् !” अनि मेरा अर्का कोठातिर जसमा सधैं पाहुना बस्छन् र आज राति पनि तीन जना पाहुना बसेका थिए तिर हेर्दै उनले फेरि भने–“गइसके गुज्राँती भैंसीहरु ? कि छँदैछन् ? छन् भने चाँडै लघार्नुहोस् ।”
उनले मलाई आज प्रकारान्तरले अलि गाली गरेको अनुभव भयो । घोसेघोसे मुन्टो लाएर चर्पीमा गएको त हेरिनसक्नु पो रहेछ । आज भने मलाई उनको चर्पी सफा गर्ने मेरै भाग लगाए । उनका भनाइअनुसार थासहरु मेरै पाहुनाका भएपछि अब कसले थला सोहोरोस् त ? स्वीपरले आनाकानी गरेको कारणले यसो भएको रहेछ । चर्पीभरि थासका थास र रासका रास छन् । छिप्पिएका र बटारिएका घोर्ले लिंडहरुले चर्पी भरिएको छ । यता थास छन् उता थास छन् । खुट्टो टेक्ने ठाउँ नै छैन । इज्जतका लागि भए पनि अब मैले नै त्यो सबै सफा नगरी भएन । गोब्र्याउने मेरा अतिथिका रुमपा आएका गुज्राँती भैंसीहशरु बिहानै धाइफल तोडिसकेकै थिए । यो सब देखाएर उनीहरुलाई नै सफा गर्न लगाउने अवस्था पनि थिएन । किनभने उनीहरु त मेरा अतिथिहरु हुन् । शास्त्रले पनि अतिथि देवो भव भनेकै छ । अनि म उनीहरुलाई अपमान कसरी गर्न सक्थें र ?
उसले नजिकै आएर हेरी र भनी–“बल्ल आज तपाईंले भोग्नुभयो । म त सधैं यो अवस्था भोगिरहेकी छु । त्यसै हो मैले डेरा सर्ने कुरा उठाएको ?” उसले भनी ।
यस्तो स्थिति बेहोरेकी मेरी बाहुनीले अनि किन डेरा सर्ने कुरा नगरोस् त ! अनि त्यही मौका पारेर उसले अझै भनी “राम राम राम ! के भन्नु र ? कहिले पानीले चर्पी भरिएको हुन्छ । कहिले चर्पीको बाहिरै थासका थास जमाएका हुन्छन् । कहिले पानीको धारो खुलै हुन्छ । कहिले बिजुली दिनभर बलिरहेको हुन्छ, जाडाका बेलामा पनि कहिले पङ्खा घुमिरहेको हुन्छ । कहिले के कहिले के ! म त पाहुनाहरुदेखि आजित भइसकें ।” उसले पाहुनामहात्म्य लगाई र भनी । यस्तो कुरा भोगेर पनि मलाई थाहै नदिएको देखेर मेरी बाहुनीदेखि मलाई खुब माया लाग्यो । गाउँठाउँका बाहुनीहरु गाईभैंसीको थास समेत गनाउला झैं गरेर परपर सर्छन् यो मेरी बाहुनीचाहिँ मान्छेका राससमेत सोहोर्दी रहिछे । यस्तो भइन्जेलसम्म पनि मलाई थाहै नदिई भकारो सोहोर्नुमा मेरी बाहुनीको कम गतिली परिनछे भन्ने लागिलागी मैले मेरा पाहुनाहरुको भकारो सोहोरें । मेरा मनमा कुराहर पनि खेखिरहेका थिए– ‘यस्तो अवस्था बेहोरिरहेकी रहिछे, अनि यो मेरी बाहुनी किन नतिल्मिलाओस् त ! उसमाथि रासन सकिएको बेलामा टुप्लुक्क आइपुगेका पाहुनाले त मेरो र मेरी बाहुनीको मगजै तताइदिन्छ । आज भने पाहुनाबिनाको दिन भयो है भन्न कहिल्यै पाइन्न । साँझ पर्न लाग्यो कि टुप्लुक्क !’ उहिले उहिले चर्पी भरिन्छ भनेर पाहुना आएको देखेपछि घरपतिहरु त्राहित्राहि हुन्थे, तर यो समस्या अब उति छैन । खालि चर्पी फोहोर नहोस् भन्ने मात्र चिन्ता बुझिन्छ ।
“कसले डेरा सर्ने कुरा ग¥यो र ?” मैले थाहा नपाएझैं गरी भनेें ।
“मलाई थाहा छ तपाईको कुरा ! छाड्नुहोस् त्याँ !” घरभेटी भन्दै थिए । मैले बल्लबल्ल चर्पी सफा पारे्र । अनि उनी हलुकिन भित्र पसे । मैेले खालीखाल्सा गरिदिएँ ।
‘“तेरो कुरा बुझें । म कुनै जुक्ती गरौंला । वास्तवमा निकै समस्या परेको रहेछ ।” मैले मेरी बाहुनीलाई थामथुम पारें ।
मेरी बासै !! अघिल्ला रातकै जस्ता अतिथिदेवोभव पधार्नुभएको रहेछ । कोठामा पस्नुअघि नै कोठो डुङ गनायो । सिन्की, गुन्द्रुक र कुहिएको घिउ हालेको हर्पेको खुँगी गनाएको जस्तो गन्ध आयाो । बिस्तारै बिचार गर्दा उनीहरु घिउबेपारी नै रहेछन् । मनमनै भनेें घिउ भनेको त अमृत समान हो । बिहानको जस्तो नर्क गनाएको त होइन नि ! गन्धैले त के नै बिग्रिन्छ र ? सके घिउ नै पो ल्याइदिएका छन् कि ? मलाई अलिकति आशा पनि पलायो । तर कहाँ घिउ ल्याउनु अिितथिले ! उनीहरु त यता सहरमा गुन्द्रुक, सिन्की र घिउको बेपार कत्तिको हुन्छ त्यसबाट कत्तिको नाफा होला भन्ने बुझ्न र वजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि पो आएका रहेछन् ।
तीन रातको	१०००।–
अब चर्पीका बाहिर पनि लेखेर पनि केही टाँस्नु पर्ने हो कि भन्ने सोच्दै थिएँ तर त्यसमा यो उपाय उति फलदायी होला जस्तो लागेन । किनभने घरका अरुअरु मान्छेहरु पनि चर्पीको त प्रयोग गर्छन् । उनीहरुको लागि पैसा लिने कुरा भएन । फेरि चर्पीको बाहिरपट्टि पैसा उठाउन को बस्ने ? यो उपाय उति राम्रो लागेन ।
परिवारको रु.	२५।—
पाहुनाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । भोलिपल्ट बिहानै मेरी बाहुनीसँग तिनले पैसा थमाउँदै भने—“रत्नपार्कमा त्यति सस्तो चर्पी छ यहाँ को बढी तिरोस् ? चर्पी उतै गर्छु यो सुतेको चंै पैसा लेऊ त ब्वारी नानी !”
उनका हातबाट मेरी बाहुनीले २०० रुप्या लिएर मख्ख परी । मेरो जुक्ती देखेर ऊ निकै दङ्ग परेको अनुभव मैले गरें । तर त्यसै बेला पाहुनाले तुरुन्तै भने—“खोइ, बिल, भ्याटसहितको बिल दिनुपर्छ । नत्र हालिदिन्छु अख्तियारमा.........।”